Google Duo malitere nnwale otu oku vidiyo | Gam akporosis
Google Duo anwalela oku vidiyo otu
Google Duo bụ ngwa ụlọ ọrụ na-akpọ vidiyo. Amalitere otutu afọ abụọ gara aga, ibudata ya na nso nso a ijeri, na-eme ka o doo anya na ọ bụ a kụrụ na gam akporo ọrụ. Maka 2019, ngwa ahụ abịaruteworị na mgbanwe dị iche iche. N'ihi na a nwalela ọtụtụ ọrụ ọhụụ taa.
Otu oku vidiyo dị ugbua na usoro nyocha na Google Duo. Agbanyeghị na ọ bụghị naanị ihe ọhụụ na-ekwe nkwa ịbịaru ngwa ahụ n'oge na-adịghị anya. Nnwale ndị mbụ amalitewokwa na ọnọdụ ọkụ dị ala, ụdị ọnọdụ gbara ọchịchịrị na ngwa ahụ.
Ọ ghọọla ebe nkịtị. Ihe ngosi vidiyo na-emewanye ka o kwe omume inwe oku vidiyo otu. Nke a bụ ihe gbasara ngwa dịka WhatsApp o Snapchat. Ugbu a, Google Duo sonyekwara ndepụta a. N'okwu a, enwere ike ịkpọ oku ndị a ihe ruru mmadụ asaa n’otu aka ahụ.
Iji jiri a ọhụrụ otu video ọkpụkpọ atụmatụ, ị ga-enwe Pịa na nhọrọ a na-akpọ ike otu. Ruo kọntaktị asaa nwere ike ịhọrọ. You nwere ike ịkpọ otu ahụ ma ọ bụrụ na-amasị gị wee malite oku a na-ekwu. Na oku na-aga, gbawara n'etiti ihuenyo na sonyere ga-emere.
Dịka anyị kwuru, Google Duo na-ewebata ọhụụ ọhụrụ na ngwa ahụ. Ọ bụ maka ọnọdụ ọkụ dị ala. Ọ bụ ụdị ọnọdụ gbara ọchịchịrị,, dị ka anyị na-ahụ n'ọtụtụ ngwa Google na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, ọ bụ ezie na maka oku vidiyo. Enwere ike ịrụ ọrụ ya mgbe ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị ala ma anyị anaghị ahụkarị.
N'ụzọ dị otú a, a pụrụ ịhụ anyị nke ọma, n'ihi na vidiyo nchapụta ga-agbanwe na Google Duo. Maka ugbu a, obere ndị ọrụ nwere ike ịnwale atụmatụ ọhụrụ ndị a na ngwa oku vidiyo. A na-atụ anya na ha ga-abata n’ọnwa mbụ nke afọ 2019. N’agbanyeghi na enweghi ụbọchị maka ugbua.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google Duo anwalela oku vidiyo otu
Nwelite na Android Pie na-enye nsogbu na Xiaomi Mi A1
Huawei na-agba afọ ọhụrụ site na iPhone